Ninkii qaaday sawirka dilkii safiirkii Ruushka oo abaalmarin ku guuleystay - BBC Somali
Ninkii qaaday sawirka dilkii safiirkii Ruushka oo abaalmarin ku guuleystay
Waxaa la shaaciyay sawiradda ku guuleystay tartanka Abaalmarinta Sawirrada Saxaafadda Caalamka ee 2017, kuwaasoo laga xushay in ka badan 80,000 oo sawir. Waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qaar ka mid ah sawirradii guulaystay.
DIGNIIN: HALKAN WAXAA KU JIRA SAWIRRO AKHRISTAYAASHA QAARKOOD LAGA YAABO INAY DHIBSADAAN
Ninkii qaaday sawirka dilkii safiirkii Ruushka u fadhiyey Turkiga, Andrei Karlov, ayaa qaatay abaalmarinta 1aad ee Sawirrada Saxaafadda Caalamka ee 2017.
Waxaa la qaaday sawirkan 19 Dicembar 2016 meel sawirrada lagu soo bandhigo oo ku taalla Ankara, waxaana qaaday Burhan Ozbilici oo ah sawir qaade u shaqeeya wakaaladda AP. Waxaa ka muuqda Mevlut Mert Altintas oo ah askari aan markaas shaqo ku jirin, in yar ka dib markii uu toogasho ku dilay safiirka.
Lahaanshaha sawirka Burhan Ozbilici/AP
Image caption Waxaa lagu qaaday sawirkan 19 Disembar 2016 meel sawirrada lagu soo bandhigo oo ku taalla Ankara, waxaana qaaday Burhan Ozbilici oo ah sawir qaade u shaqeeya wakaaladda AP. Waxaa ka muuqda Mevlut Mert Altintas oo ah askari aan markaas shaqo ku jirin, in yar ka dib markii uu toogasho ku dilay safiirka.
Daniel Berehulak oo ka tirsan wargayska the New York Times ayaa ku guulaystay abaalmarinta 1aad ee kaalinta wararka guud, isagoo soo bandhigay sawirro maxaabiis ku xiran Manila oo yiri 'waxay noo gowracayaan sidii xoolihii'. Waxay ku jireen saldhig boolis.
Lahaanshaha sawirka Daniel Berehulak for The New York Times
Image caption Daniel Berehulak oo ka tirsan wargayska the New York Times ayaa ku guulaystay abaalmarinta 1aad ee kaalinta wararka guud, isagoo soo bandhigay sawirro maxaabiis ku xiran Manila oo yiri 'waxay noo gowracayaan sidii xoolihii'. Waxay ku jireen saldhig boolis.
Laurent Van der Stockt, oo Getty u qaada sawirrada wargayska Le Monde ayaa ku guulaystay kaalinta sawirrada wararka guud ee keli-kelida, isagoo qaaday sawirkan. Sawirka ayaa ku saabsan muuqaal la xiriira hawlgal ay ciidanka hawlgallada gaarka ah ee ciraaq oo baadigoob ka wada guryo ku yaalla Gogjali, bariga Mosul, 2 Nofembar 2016.
Lahaanshaha sawirka Laurent Van der Stockt/Getty Reportage
Image caption Laurent Van der Stockt, oo Getty u qaada sawirrada wargayska Le Monde ayaa ku guulaystay kaalinta sawirrada wararka guud ee keli-kelida, isagoo qaaday sawirkan. Sawirka ayaa ku saabsan muuqaal la xiriira hawlgal ay ciidanka hawlgallada gaarka ah ee ciraaq oo baadigoob ka wada guryo ku yaalla Gogjali, bariga Mosul, 2 Nofembar 2016.
Sergey Ponomarev, ayaa kaalinta labaad ku galay sawirrada wararka guud, wuxuuna ku mutaystay 12 sawir oo uu ka qaaday qoys ka cararaya dagaalka Mosul, ayadoo ceelasha saliidda ee Qayyara ay gubanayaan.
Lahaanshaha sawirka Sergey Ponomarev for The New York Times
Image caption Sergey Ponomarev, ayaa kaalinta labaad ku galay sawirrada wararka guud, wuxuuna ku mutaystay 12 sawir oo uu ka qaaday qoys ka cararaya dagaalka Mosul, ayadoo ceelasha saliidda ee Qayyara ay gubanayaan.
Amber Bracken waxay kaalinta 1aad ku gashay sawirrada xaaladda markaas taagan ka hadlaya, ayadoo soo bandhigtay dibadbaxayaal ka dagaallamaya dhuun cusub oo saliidda qaadaysa oo la dhigayo waqooyiga Dakota. Muuqaalka ayaa muujinaya nin caano lagu shubayo ka dib markii boolisku ay ku buufiyeen basbaas.
Lahaanshaha sawirka Amber Bracken
Image caption Amber Bracken waxay kaalinta 1aad ku gashay sawirrada xaaladda markaas taagan ka hadlaya, ayadoo soo bandhigtay dibadbaxayaal ka dagaallamaya dhuun cusub oo saliidda qaadaysa oo la dhigayo waqooyiga Dakota. Muuqaalka ayaa muujinaya nin caano lagu shubayo ka dib markii boolisku ay ku buufiyeen basbaas.
Usain Bolt oo isagoo qoslaya gadaal u eegaya raggii la tartamayey, markii uu ku guulaysanayey orodka 100-ka mitir, cayaarihii Olombigga ee Rio de Janeiro. Sawirka oo uu qaaday Kai Oliver Pfaffenbach wuxuu galay kaalinta 3aad ee sawirrada keli-kelida ee cayaaraha.
Lahaanshaha sawirka Kai Oliver Pfaffenbach/Reuters
Image caption Usain Bolt oo isagoo qoslaya gadaal u eegaya raggii la tartamayey, markii uu ku guulaysanayey orodka 100-ka mitir, cayaarihii Olombigga ee Rio de Janeiro. Sawirka oo uu qaaday Kai Oliver Pfaffenbach wuxuu galay kaalinta 3aad ee sawirrada keli-kelida ee cayaaraha.
Francis Perez ayaa ku guulaystay sawirrada keli-kelida ee bii'ada. Sawirkan waxaa la qaaday 8 Juun 2016, waxaana ka muuqata qubo uu ku dhegay shabaqa kalluunka, xeebta Tenerife ee jasaa'irka Canary.
Lahaanshaha sawirka Francis Perez
Image caption Francis Perez ayaa ku guulaystay sawirrada keli-kelida ee bii'ada. Sawirkan waxaa la qaaday 8 Juun 2016, waxaana ka muuqata qubo uu ku dhegay shabaqa kalluunka, xeebta Tenerife ee jasaa'irka Canary.
Brent Stirton oo ah sawirqaade ka tirsan National Geographic Magazine ayaa ku guulaystay kaalinta 1aad ee sawirrada sheekooyinka xambaarsan ee bii'ada, gaar ahaanna badbaadinta Wiyisha. Sawirkan waxaa ka muuqda laba nin oo ay gacanta ku dhigeen kooxda ka hortagga dilka ugaarta ee Mosambiik.
Lahaanshaha sawirka Brent Stirton/National Geographic
Image caption Brent Stirton oo ah sawirqaade ka tirsan National Geographic Magazine ayaa ku guulaystay kaalinta 1aad ee sawirrada sheekooyinka xambaarsan ee bii'ada, gaar ahaanna badbaadinta Wiyisha. Sawirkan waxaa ka muuqda laba nin oo ay gacanta ku dhigeen kooxda ka hortagga dilka ugaarta ee Mosambiik.
Abaalmarinta kaalinta 2aad ee sheekooyinka bii'ada waxaa la siiyey Ami Vitale, oo soo bandhigay xayawaanka la yiraahdo Panda oo weyraxsan. Muuqaalka ayaa ah Panda 16 jir ah oo la yiraahdo Ye Ye oo ku xaraysan seere weyn oo ugaarta loogu tala agalay , bartamaha seeraha Wolong.
Lahaanshaha sawirka Ami Vitale/National Geographic
Gawaarida xamuulka oo arday u sida guryahooda ka dib markii wadooyinka la soo mariyey dambaska meydkii Fidel Castro, gobolka Las Tunas ee Kuuba. Sawirkan oo uu qaaday Tomas Munita ayaa ku guulaystay kaalinta sawirrada ka hadla nolol maalmeedka.
Lahaanshaha sawirka Tomas Munita/The New York Time
Image caption Gawaarida xamuulka oo arday u sida guryahooda ka dib markii wadooyinka la soo mariyey dambaska meydkii Fidel Castro, gobolka Las Tunas ee Kuuba. Sawirkan oo uu qaaday Tomas Munita ayaa ku guulaystay kaalinta sawirrada ka hadla nolol maalmeedka.
Dadka guulaystay iyo kuwa kama dambaysta soo gaaray ayaa ka qayb qaadan doona bandhig ka furmi doona Amsterdam 20 Abriil, 2017.
Muuqaallada oo dhan waxaad ka daawan kartaa www.worldpressphoto.org.